I-SOTA DE CLUBS: ITHETHA UKUTHINI?, UKUTOLIKWA KUNYE OKUNYE
Njengawo onke amanye amakhadi afunyenwe kumgangatho, i jack yeewands ibhekisa kumntu omtsha; Inokuba yindoda nomfazi, kwaye inokuba yinkwenkwe okanye intombazana.
1 Inkcazo yemizobo yetshathi
2 UJack weeWands ngasekunene
2.1 Kwilizwe lothando
2.2 Xa kuziwa emsebenzini
2.3 Kwimicimbi yezempilo
3 Ukuguqula iJack yeeWands
3.1 Kwilizwe lothando
3.2 Ngokubhekiselele emsebenzini
3.3 Malunga nezempilo
Inkcazo yemizobo yetshathi
Xa kufikwa kunobumba UJack weewands tarotKuyo, kunokwenzeka ukuba ube nomfanekiso-ngqondweni wentombazana encinci okanye umfana omncinci onempahla entle, eyedwa kwindawo eyomileyo neyomileyo; Umfanekiso usibonisa ukuba lo mfana uveza ngokucacileyo nangokucacileyo ukuba yeyiphi iminqweno yakhe kunye neminqweno yakhe.
Ungumphuphi ozimiseleyo, othe nangona engawenzanga amaphupha akhe, ukwinqanaba lokuyila; Uqinisekile ngokwaneleyo ukuba angaphumeza kwaye azalisekise yonke iminqweno yakhe kwixa elizayo. Ngokubhekiselele kwi-wardrobe, njengakwezinye iinkundla ze-wand, i-salamanders iboniswa; ehambelana nomlilo wenguqu.
Kwimeko yeleta UJack webastos spanish deck, ukubonakala komntu oselula, kufana kakhulu naleyo iboniswe kwi amakhadi e-tarot; njengoko kunokubonwa emfanekisweni.
UJack weeWands ngasekunene
Ngengqondo ngokubanzi, i-jack ye-wands inokubhekisa kubo bobabini indoda nomfazi, kwaye isini asinamsebenzi kule meko, kuba ibizwa ngokuba yijack okanye iphepha; kodwa, ngaphandle kwamathandabuzo, ngumntu omncinci, oqala nje indlela yobomi.
Ungomntu onamandla amakhulu kunye neetalente, onesimo sengqondo namandla okuhamba indlela yobomi. Kwangokunjalo, ngaphandle kokuba eshiye inqanaba lobuntwana ngasemva, akakabi mdala ngokupheleleyo; ukwinqanaba lokukhula nokufunda.
La UJack weeWands ngothandoKuthetha ukuba umntu ulwalamano oluhambelanayo noluzinikeleyo, lixesha elifanelekileyo lokwenza izicwangciso kunye kunye nokuqhubela phambili ebomini babo njengesibini.
Kwelinye icala, ukuba ubudlelwane abulunganga, eli lixesha lokuba uzibuze imibuzo, ulinganise i-pros and cons; Kananjalo nokuthathela ingqalelo ukuba kufanelekile ukulwa, okanye ukuvalelisa.
Ngokunjalo, ukuba umntu akatshatanga, ukubonakala kwejack yeewands kunokuthetha ukuba umntu omtsha uza ebomini bakhe; Oku kungumdla, ukuguquguquka, ithemba kunye nokuphila.
Xa kuziwa emsebenzini
Le leta ihlala ililizwi elihle emsebenzini; sisalathiso sokufika kwexesha elizinzileyo, elinokubakho kwezinto ezintsha kunye notshintsho olulungileyo. Ngoku, umsebenzi uya kuba mnandi ngakumbi kwaye ube mnandi; Ngokunjalo, kunokwenzeka ukuba ii-odolo zemisebenzi emitsha kunye nemibono emitsha inokuvela; ngokufanayo, umntu omncinci angabonisa ukufika ukuze ancede kwimisebenzi.
Kule meko, iJack yeWands khadi imele iindaba ezimnandi ngokulinganayo, ngakumbi ukuba umntu uphuma ekuguleni; Eli lixesha lokuba ufumane uhlobo oluthile lonyango okanye lokufunda.
Kwelinye icala, umyalezo usenokubonisa ukuba, ukuba umntu ebenesifo okanye ukungaphatheki kakuhle okungakhange kunyangwe; Eli lixesha lokuthatha amanyathelo kwaye uqale ukwenza nantoni na eyenziwayo ukuphucula.
Ukuguqula iJack yeeWands
Kwimeko yejack eguqulweyo yamakhadi eewands, inokubonisa ukuba umntu uzame kaninzi ukufezekisa into kwaye uhambe ngeendlela ezingaphezulu kwesinye; kodwa nangona kunjalo, inika umbono wokuba ayiphumelelanga kwimpumelelo eyayilindelwe, kwaye nokuba ayikhange ibenampumelelo.
Ingxaki inokuba ngenxa yomntu obambeleyo engacwangcisanga, eshiya izinto ngamabona-ndenzile okanye athembe iinkwenkwezi zabo ezinethamsanqa; kusenokwenzeka ukuba ucwangciso olungcono lweziganeko, izicwangciso zihambe ngendlela engcono.
Xa le leta ivela, kubonisiwe ukuba kwingoma eya kubantu abatshatileyo, eli lixesha lokuzinikela okuncinci; kodwa, kufuneka sikuphephe ukunyanzelisa kakhulu, kuba kunokuvela izinto ezimbi kunokulunga.
Ijack eguqulweyo yeeklabhu ayilo khadi elibonisa ngokucacileyo ikhefu; nangona, ukuba izinto azihambi kakuhle, lixesha lokwenza into, ngaphambi kokuba yonke into ilahleke ngokupheleleyo.
Kwangokunjalo, kubantu abangatshatanga, ukubonakala kwale leta kunokuba ngumqondiso wokufika kwamaxesha ngamaxesha othando olungafuni ukuzibophelela; Ngendlela efanayo, inokubonisa ukuba kukho umntu onomdla, kodwa engenalo igama elihle.
Ngokudibeneyo noko besikukhankanyile ekuqaleni kweli candelo; Ngokumalunga nomsebenzi, i-jack ye-wands ingabonisa ubunzima kwizizathu zokungazithembi; Umntu angazifumana ekwimeko apho kufuneka enze isigqibo.
Kwimeko yokuba ungaphangeli, kunokwenzeka ukuba emsebenzini womdla, kuya kufuneka ukhuphisane nomntu omncinci; Ke ngoko, kuya kuthatha umzamo omncinci ukoyisa.
Ijack eguqulweyo yeeklabhu ixelela umntu ukuba ayeke ukuzama ukwenza yonke into eyedwa; Iziphumo ziya kuba ngcono ngokuvula ukutolikwa kwabanye abantu, iimpembelelo ezilungileyo, kunye namava.
Xa impilo yethu isilela, kubalulekile ukuba sincike kwabo basingqongileyo; kokubini kubantu esibathandayo, nakwiingcali. Kungenzeka ukuba ukusebenza komzimba kuye kwancipha kwaye ukukhathala kwanda, lixesha lokuphumla.
Okokugqibela, sifuna ukushiya inyani yokuba, eSpain kunokwenzeka ukuba ufumane isiselo esinxilisayo esaziwa njenge ijin jack yeewands; Kwangokunjalo, ukwandisa ulwazi malunga nale leta intle ngakumbi, nantsi sinayo ividiyo apho kuxoxwa khona.
Sikwacebisa ukuba ufunde inqaku lethu I-Ace yeekomityiKuya kufuneka ufake ikhonkco.